Nika ifoto yemidiya yoluntu kubafowunelwa bakho kwi-MacOS High Sierra | Ndisuka mac
Nikezela ifoto yemidiya yoluntu kunxibelelwano lwakho kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
Kungumsebenzi obukwicala eliphakathi kwi-MacOS High Sierra ixesha elide, kodwa ubuncinci kwimeko yam khange ndiyithande, kuba ulwazi esilukhupheleyo kunxibelelwano lwasentlalweni, aluzange ligqibe ukufakwa ngokuchanekileyo kwindawo yoqhakamshelwano . Ngalesi sifundo sizimisele ukukhuphela ulwazi lwabafowunelwa bethu kuthungelwano lwentlalo kwaye ukuba kwenzeka ngengozi yomfowunelwa, oko kukuthi, uqhakamshelwano kwi-imeyile yethu (ilungu losapho okanye umhlobo umzekelo) nakwiinethiwekhi zentlalo, sinokukhetha isithombe ukuba sithanda eyona okanye ngcono ukuyichonga.
Into yokuqala, kufuneka senze iitsheki zokuqala:
Jonga ukuba siyinikezele ngokuchanekileyo iakhawunti yethuOko kukuthi, iakhawunti apho bakho abafowunelwa kuthi. Ukwenza oku, Fikelela abafowunelwa, ukhetho kunye nakwifestile yokuqala, ekugqibeleni sifunda: iakhawunti emiselweyo. Apho kuya kufuneka ubonise iakhawunti yethu ephambili, kwimeko yam, iakhawunti ye-iCloud.
Ngaba iinethiwekhi zentlalo zibhalisiwe kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra. Sijonga ngokufikelela kukhetho lwenkqubo- iiakhawunti ze-intanethi. Kwicala lasekhohlo, sibona iinkonzo esizibhalisileyo. Ukuba asinayo, umzekelo u-Facebook obhalisiweyo kwaye sifuna ukuhlaziya abafowunelwa ngeefoto ze-Facebook, kufuneka singene kwicala lasekunene kwaye ucofe u-Facebook. Umncedisi uya kusicela igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo kwaye emva kokwamkela, siya kuba nenkonzo ebhalisiweyo.
Ngoku ekubeni sinonxibelelwano lwethu oluphambili kunye neenethiwekhi zethu zentlalo, sinokuvumelanisa abafowunelwa kamva, ukhethe ifoto esikunike yona, okanye ifoto oyisebenzisayo kwinethiwekhi yoluntu.
Ngaphandle kokushiya iiAkhawunti ze-Intanethi, cofa kwicala lasekhohlo lenethiwekhi yoluntu esifuna ukungqamanisa. Ngoku isikrini kufuneka sivule kunye nedatha ekufuneka ihambelane: abafowunelwa, iikhalenda, izaziso, njl. nasezantsi ngasekunene, hlaziya abafowunelwa. Sinqakraza ukhetho kwaye licela ukuba siqinisekise.
Ngoku kufuneka sibe namakhadi amabini avela kumsebenzisi ofanayo, oko kukuthi, abafowunelwa ababini abanjengo "Carmen López". Kungcono ukudibanisa omabini amakhadi ukuqokelela ulwazi. Sicinezela kuzo zombini kwaye emva koko sisebenzise i Iqhosha elinqumlayo le-keyboard Shift + Cmd + L. Ikhadi elinye liya kuhlala nalo lonke ulwazi. Sicinezela ukuhlela eli khadi kwaye kwindawo esembindini, iindlela ezimbini kufuneka zivele: ulwazi kunye nomfanekiso. Cofa kumfanekiso. Ngoku siza kubona ifoto esuka kwi-iCloud kunye nefoto kwinethiwekhi yethu yoluntu, ukukhetha le siyifunayo. Emva koko, samkela kwaye umfanekiso uya kutshintsha kwangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Nikezela ifoto yemidiya yoluntu kunxibelelwano lwakho kwi-MacOS ePhakamileyo yeSierra
I-Apple ikhupha iMacOS ePhakamileyo yeSierra 2 beta 10.13.1 yabaphuhlisi
Guqula imifanekiso kunye namaxwebhu akho kwiPDF ngeNgcali yoMyili wePDF, simahla ixesha elilinganiselweyo